Manidina eran'izao tontolo izao ny fiaramanidinao taratasy. Vaovao momba ny gadget
Fiaramanidina taratasy avy amin'ny finday avo lenta hizaha na aiza na aiza eto ambonin'ny planeta
Theory teôria dia namolavola Paper Planes, fampiharana iray nipoitra avy amin'ny Google I / O 2016 ary anisan'ireo fampiharana fanandramana nasongadin'i Google avy amin'ny tranonkala natokana ho azy. Ny foto-kevitr'ilay fampiharana dia ny fandefasana fiaramanidina taratasy virtoaly ahafahanao manidina manerana an'izao tontolo izao.
Ny mampiavaka manokana ny fandefasana ny fiaramanidina taratasy dia ny ahafahanao manisy tombo-kase ny tombo-kasenan'ny faritaninao ka rehefa misy "mihaza" ny fiaramanidinao dia afaka izy ireo pirinty ny anao dia ataovy manidina manerana ny planeta iray manontolo indray. Amin'izany fomba izany dia misy fiaramanidina taratasy an'aliny saika an'arivony izay mandeha manodidina ny toerana rehetra eto ambonin'ny planeta.
Ny pejy dia eo amin'ny pejy Fanandramana Android avy amin'i Google ary mety ho alaina avy amin'ny Google Play mihitsy Fivarotana. Ny tanjon'ny Planin-taratasy dia ny hahatonga ireo fiaramanidina taratasy ireo ho lasa fifandraisana eo amin'ireo olona rehetra izay amin'ny toerana samihafa eto ambonin'ny planeta mba hamorona fifandraisana eo anelanelany.
Io tontolo 3D io dia fandikana amin'ny WebGL amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranomboky three.js ary manararaotra ireo tranga sy WebWorkers manisa sy manome ny fiaramanidina an'arivony manidina manodidina ny planeta. Rehefa tafidina ny fiaramanidina dia azo trandrahana tsy ampoizina amin'ny fotoana rehetra. Vantany vao vita izany dia misy fampandrenesana fanosehana hita ao amin'ny Android N izay mampiseho ny halavany tamin'ny tombo-kase na tombo-kasen'ilay tranonkala nanombohany.
Manonta ny azy manokana, miondrika izy dia atsipy indray. Misy tranokala iray mametaka ireo fiaramanidina rehetra eo akaiky eo hahitanao azy ireo na hankafiziny mihitsy aza ny fomba fivelany manerana ny lanitra amin'ny alàlan'io 3D io. Hevitra manaitaitra sy manaitra ny manatona akaiky kokoa ny toerana fantatra amin'ny faritra hafa amin'ny planeta izay tsy noeritreretinao akory hoe nisy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Fiaramanidina taratasy avy amin'ny finday avo lenta hizaha na aiza na aiza eto ambonin'ny planeta
Fampitahana haingana ny maodely iPhone rehetra navotsotra
Space Works dia miasa amin'ny fanatanterahana ny stasis mpandeha amin'ny dia lavitra